Darodar.com बाट रेफरर स्पाम। यो समस्या कसरी समाधान गर्ने? - Semalt द्वारा जवाफ
के तपाई darodar.com बाट रेफरल तपाईको गुगल एनालिटिक्समा देख्नुहुन्छ? धेरै ब्लगरहरू र वेबमास्टर्सले यस समस्याको सामना गर्छन् जब कि darodar.com रेफरल स्पाम तिनीहरूको वेबसाइटहरूमा लिंक गरिएको छैन। Darodar.com एक वेबसाइट हो जुन तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाताको सन्दर्भ सूचीमा देखिन्छ र वास्तवमा तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्दैन। यसको सट्टामा, तपाईं केहि अनियमित भ्रमणहरू देख्नुहुनेछ १००% बाउन्स रेटको साथ र तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा शून्य समय। Darodar.com एक साइट हो जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई रेफरर स्पाममा संलग्न गर्दछ। यसले तपाईंको साइटमा धेरै यातायात पठाउन विभिन्न प्रकारका प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ, जबकि बाउन्स रेट औसत भन्दा उच्च छ।
केही वेबसाइटहरूले तिनीहरूको उत्तम रेफररहरूको सूची प्रकाशित गर्दछन्, र ह्याकरहरूले उनीहरूको लिंकहरू थप्नको लागि तिनीहरूको सूचीहरू प्रयोग गर्दछन्, आशा छ कि केही मानिसहरूले उनीहरूको साइटहरू भ्रमण गर्नेछन् र उनीहरूका उत्पादनहरू खरीद गर्दछन्। स्प्यामिंग वेबसाइटहरू कालो टोपी एसईओ कम्पनीहरूका नियमित ग्राहकहरू हुन्, जसले उनीहरूको ट्राफिक बढाउन सम्झौता गर्छन् यदि उनीहरूले कालो टोपी एसईओ रणनीति प्रयोग गरेको छ भने। ओलिभर किंग, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, तपाइँलाई सम्झना दिलाउँछ कि यदि एक एसईओ फर्म दिन के भीतर अपने यातायात को बढ़ावा देने को प्रतिज्ञा, यो रेफरल यातायात कार्यक्रम मा संलग्न हुन सक्छ।
रेफरर स्पामले तपाईंको डाटालाई कसरी असर गर्दछ?
यो भन्न सुरक्षित छ कि सन्दर्भकर्ता स्पामले तपाईको गुगल एनालिटिक्स डाटालाई धेरै तरीकाले असर गर्छ। गुगल एनालिटिक्स प्रयोग गर्नुको प्रमुख कारणहरू अवलोकन गर्नु भनेको कुन वेबसाइटहरूले तपाईंलाई वास्तविक ट्राफिक पठाउँदैछ र कुन नक्कली ट्राफिक जेनरेशन प्रोग्रामहरूमा संलग्न छन्। अन्य वेबसाईटहरूबाट वास्तविक लि high ्कहरूले तपाईंलाई उच्च खोज इञ्जिन स्तर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ, र कुन वेबसाइटहरूले तपाईंलाई वास्तविक भ्रमणहरू पठाउँदै छन् भनेर मूल्या evalu्कन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो जानकारी तपाइँको वेबसाइट को समग्र प्रदर्शन सुधार गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। निश्चित गर्नुहोस् वेबसाइटमा बिताएको समय र बाउन्स दर मार्कमा छ; यी दुई चीजहरूले तपाईंको साइटको संरचना र सजावट साथै यसको सामग्री सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंसँग एक व्यापार वेबसाइट छ भने, यो तपाईंको पृष्ठको रूपान्तरण दर जान्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं गुगल एनालाइटिक्स डाटामा आधारित आफ्नो साइट को बारे मा महत्वपूर्ण निर्णय लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पहिले सन्दर्भित स्प्याम को छुटकारा पाउन पर्छ सुनिश्चित गर्न को लागी एनालिटिक्स खाता तपाईंलाई सही जानकारी प्रदान गर्दछ।
यसलाई कसरी छुटकारा दिने?
राम्रो समाचार यो हो कि तपाईं रेफरल स्पामलाई तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स डाटामा हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ। उत्तम तरिका केहि फिल्टरहरू सेट अप गर्नु हो र ती साइटहरूलाई तपाईंलाई नक्कली आगन्तुकहरू पठाउनबाट रोक्नु हो।
Darodar.com को लागी फिल्टर सेट अप गर्न, तपाईले यी चरणहरु अनुसरण गर्नु पर्छ:
तपाईको गुगल एनालिटिक्स खातामा साईन ईन गर्नुहोस् र प्रशासन भागमा जानुहोस्।
ड्रप-डाउनमा, खाता र सम्पत्ती चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं फिल्टर आउट गर्न चाहानुहुन्छ।
यो समर्पित दृश्यमा फिल्टरहरू सिर्जना गर्नका लागि राम्रो छ, त्यसैले तपाईंले दृश्य ड्रप-डाउन सेक्सनबाट नयाँ दृश्य सिर्जना गर्नुहोस् विकल्प छान्नुपर्नेछ।
दृश्य सेक्सन अन्तर्गत, तपाईंले फिल्टरमा क्लिक गर्नुपर्छ र नयाँ फिल्टर बनाउनु पर्छ।
Darodar.com को रूप मा तपाइँको नयाँ फिल्टरमा एक नाम बाँड्न नबिर्सनुहोस्।
कस्टम फिल्टर प्रकार चयन गर्नुहोस् र अपवर्जन विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो भए तपाईले फिल्टर फिल्टर ड्रप-डाउन मेनूमा रेफरल विकल्प छनौट गर्नुपर्नेछ।
यहाँ तपाईले darodar \_ .com प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ र परिवर्तनहरू बचत गर्नुपर्नेछ।
के त्यहाँ कुनै सजिलो तरीका छ?
इमानदारीपूर्वक कुरा गर्दा, यो darodar.com रेफरल स्पाम रोक्नको लागि सब भन्दा सजिलो र सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका हो। तर तपाईं ब्ल्केल, एक सेवा जसले स्पाम रेफरललाई गुगल एनालाइटिक्स डाटाबाट स्वत: बाहिर राख्दछ।